Niverina tamin'ny fahitalavitra i Jon Stewart niaraka tamin'ny Apple TV + | Avy amin'ny mac aho
Niverina tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'ny Apple TV + i Jon Stewart
Miresaka momba ny drafitra Apple ankehitriny sy ho avy momba ny serivisy horonantsary mivantana ihany koa izahay. Amin'ity fotoana ity dia mila miresaka momba an'i Jon Stewart izahay, mpanoratra, mpamokatra ary mpampiantrano ny The Daily Show taloha, izay hiverina amin'ny fahitalavitra aorian'ny fisotroan-dronono amin'ny 2015, hoy ny The Hollywood Reporter.
Jon Stewart dia handray seho misy ankehitriny, izay ny lohahevitra lehibe indrindra amin'izao fotoana izao no horesahina. Amin'izao fotoana izao, tsy misy lohateny ho an'ny famerenan'ity mpanolotra ity amin'ny fahitalavitra. Ny fantatsika dia ny adiny tsirairay dia maharitra adiny iray ary amin'ny famokarana, ankoatr'i Stewart, dia hitantsika koa i Richard Plepler, taloha tao amin'ny HBO.
Jon Stewart dia 20 taona mahery ny feon'ny fanesoana politika amerikana avy amin'ny Comedy Central, ary nahazo loka Emmy 20 mahery. Hatramin'ny nandao The Daily Show dia nifantoka tamin'ny ezaka vitany tamin'ny mpanatanteraka mpamokatra The Late Show "mpamosavy Stephen Colbert."
Tsy hanana fizarana isan-kerinandro na isam-bolana ity andiany ity, noho izany dia ho tonga amin'ny Apple TV + izy ireo rehefa misy olana vaovao. Ahoana raha hanana atiny mahazatra kokoa ny endrika podcast, dia manamafy ny drafitr'i Apple hampiasa ny sehatra podcast-ny hanatsarana ny atiny atolotra ao amin'ny Apple TV +.
Apple dia mifantoka amin'ny ezak'izy ireo amin'ny andian-tsarimihetsika sy antontan-taratasy, fa koa amin'ny atiny ankehitrinyOprah sy ny fanaovan-tsonia an'i Stewart dia ohatra roa mazava amin'ny tian'ny Apple TV + hahatongavana: serivisy vidéo mivantana izay ahitanao ny atiny rehetra, manomboka amin'ny tantara forona ka hatramin'ny vaovao farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Niverina tamin'ny fahitalavitra niaraka tamin'ny Apple TV + i Jon Stewart
Fanasana ho an'ny mpamorona ho an'ny seho mifantoka amin'ny fandaharana amin'ny Apple Silicon